सञ्चालक समिति सदस्यलाई नर्सिङ सिट भागबन्डा - पब्लिक पाेष्ट
August 1, 2019 EP EDITORLeaveaComment on सञ्चालक समिति सदस्यलाई नर्सिङ सिट भागबन्डा
काठमाडौ ।ओखलढुंगा स्कुल अफ हेल्थ साइन्समा आएको नर्सिङ अध्ययनको सिट सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले भागबन्डा गरेर लिएका छन् । क्याम्पसमा उपलब्ध २० वटा नर्सिङ सिटमध्ये १२ वटा सिद्धिचरण नगरपालिकाका मेयरदेखि सिटिइभिटीका कर्मचारी र उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीसम्मलाई भाग लगाइएको छ । सञ्चालक समितिको यो निर्णयबाट पहुँच नहुनेहरूले नर्सिङ अध्ययन गर्न नपाउने भएका छन् ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) का सम्बन्धनमा ०७५/७६ देखि ओखलढुंगामा नर्सिङ कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । क्याम्पसले शैक्षिक सत्र ०७६/७७ का लागि २० सिट पाएको थियो । त्यसमध्ये १२ सिट सञ्चालक समितिमा रहेका जनप्रतिनिधि, व्यापारी र कर्मचारीले आफन्तलाई सिफारिस गर्न मिल्ने गरी भागबन्डा गरेका हुन् ।
सञ्चालक समितिमा जोजो छन्, उनैको भागमा कोटा
ओखलढुंगामा सञ्चालित स्कुल अफ हेल्थ साइन्सको कोटाबारे ८ साउनमा सिटिइभिटीको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले निर्णय गरेको हो । बैठकको अध्यक्षता नर्सिङ कलेजका निर्देशक तथा सिटिइभिटीका कर्मचारी विनयकुमार मिश्रले गरेका थिए । बैठकमा सहभागी हुन ओखढुंगामा भएका सञ्चालक समिति सदस्यहरू पनि काठमाडौं पुगेका थिए ।
सिद्धिचरण नगरपालिकाका मेयर मोहनकुमार श्रेष्ठ, उद्योग वाणिज्य संघ ओखलढुंगाका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रकुमार मास्के, ओखलढुंगा सामुदायिक अस्पतालका निर्देशक डा. रोशन खरेल बैठकमा सहभागी थिए । उनीहरूले आफैँले सिफारिस गर्न मिल्ने गरी कोटा भाग लगाएका छन् ।
जसअनुसार सिद्धिचरण नगरपालिकालाई दुई, वाणिज्य संघलाई दुई, सिटिइभिटीका कर्मचारीलाई एक र सामुदायिक अस्पताललाई एउटा कोटा भाग लगाइएको छ । त्यस्तै, पुरुषका लागि तीन, छात्रवृत्तिका लागि दुई र अनमीका लागि एउटा कोटा छुट्याइएको छ । बाँकी आठ सिट मात्र खुला प्रतिस्पर्धाबाट चयन गरिने निर्णयमा उल्लेख छ । जिल्लाका वर्तमान तथा पूर्वसांसदको मागअनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको पहलमा गत वर्षबाट ओखलढुंगामा नर्सिङ क्याम्पस सञ्चालनमा आएको हो ।
निर्णयको चौतर्फी विरोध
जनप्रतिनिधिकै उपस्थितिमा व्यापारी र कर्मचारीले नर्सिङ कक्षाको विद्यार्थी कोटा भागबन्डा गरेपछि यसको विरोध भएको छ । निर्णयको प्रतिलिपि सार्वजनिक भएसँगै विद्यार्थीका संघ–संगठन, अभिभावक र सरोकारवालाले विरोध जनाएका हुन् ।सांसद यज्ञराज सुनुवारले अहिले भएको निर्णय गलत रहेको बताए । ‘यदि भागबन्डाको निर्णय भएकै हो भने त्यो गलत हो,’ उनले भने, ‘यसो गर्न मिल्दैन । क्षमतावान् विद्यार्थीले प्रतिस्पर्धा गरेर पढ्न पाउनुपर्छ ।’
सञ्चालक समितिले विधि, पद्धति र नागरिकको हितविपरीत निर्णय गरेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जयबहादुर श्रेष्ठको भनाइ छ । ओखलढुंगाका क्याम्पस सञ्चालक समितिका पदाधिकारीसमेत काठमाडौं पुगेर एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै श्रेष्ठले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताए । ‘इच्छुक सबै सर्वसाधारणले प्रतिस्पर्धाका आधारमा पढ्न पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा सञ्चालक समितिले भागबन्डा गरेर कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्न खोजिएको हो ? यो निर्णय सच्याउन जरुरी छ ।’ जिल्लामा बैठक बस्दा भागबन्डाको सहमति नहुने भएकाले सञ्चालक काठमाडौं पुगेर बैठक बसेको उनको आरोप छ ।
गाउँमै नर्सिङ क्याम्पस सञ्चालन भएपछि पढ्न पाउने रहर बोकेर फाराम भरेका विद्यार्थीले पनि निर्णयको विरोध गरेका छन् । ‘मन्त्री र सांसदले जिल्लामै नर्सिङ क्याम्पस सुरु भयो । पढ्नुस् अघि बढ्नुस् भनेको सुनेर पढ्ने रहर जगेको थियो,’ नर्सिङ कक्षाका लागि फाराम भरेकी एक छात्राले भनिन्, ‘न मैले सिद्धिचरण नगरपालिकाको मेयर चिनेको छु, न त उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष । अब मैले यहाँ पढ्न पाउने रहेनछु ।’ १२ वटा कोटा भागबन्डा गरेर आठवटामा प्रतिस्पर्धा गर्ने भनिए पनि त्यसमा पनि निष्पक्षता नहुने विद्यार्थीको धारणा छ ।
विद्यार्थी नेताले कोटा भागबन्डाको निर्णय तत्काल बदर नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘सुन्दै अच्चम्म लाग्ने के निर्णय गरेका होलान्, बुझेकै मान्छेले यसरी विद्यार्थीको कोटा बाँडेर खाने काम राम्रो होइन । निर्णय सच्याएर २० वटै सिटमा क्षमताका आधारमा भर्ना गराइनुपर्छ,’ नेकपानिकट विद्यार्थी नेता दीपक फुयाँलले भने, ‘यदि पेलेर जान खोजे हामी चुप बस्दैनौँ । राज्यको निकायमा व्यक्ति हाबी हुन मिल्दैन ।’
ओखलढुंगा क्याम्पसका स्ववियु उपाध्यक्ष निशान श्रेष्ठले विद्यार्थीको मनोभावनाविपरीत भएको निर्णय नसच्याए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । ‘अब नर्सिङ पढ्नेले मेयर र कर्मचारी अनि व्यापारीलाई ढोग्न जानुपर्ने ? नत्र पढ्न नपाउने ? यो दुनियाँमा कतै नभएको हाम्रो जिल्लामै किन हुन्छ ?’ उनले भने, ‘निर्णय बदर गरेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा क्षमता भएका इच्छुकलाई अवसर नदिए आन्दोलन हुन्छ ।
त्यसको जिम्मेवारी यिनै हस्ताक्षरकर्ताले लिनुपर्छ ।’ सामाजिक सञ्जालमा समेत कोटा भागबन्डाको तीव्र आलोचना भइरहेको छ । तर, ओखलढुंगा स्कुल अफ हेल्थ साइन्सका सञ्चालक समिति अध्यक्ष मिश्रले पदाधिकारीको सिफारिसमै विद्यार्थी भर्ना गरिने बताए ।
क्याम्पस अध्यक्ष भन्छन्– कोटा कसलाई दिने भन्ने निर्णय हामी नै गर्छौँ
कोटा कस–कसलाई दिने भन्ने निर्णय व्यवस्थापन समितिले नै गर्ने हो । हामीले त्यो निर्णय गरेका छौँ । कोटामा परे भन्दैमा कमजोर विद्यार्थीले अवसर पाउँदैन । प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थीले मात्र छुट्याइएको कोटामा अध्ययन गर्न पाउँछ । नयाँपत्रिकाबाट
February 19, 2018 EP EDITOR
April 13, 2018 EP EDITOR